रोचक : भात खाने चलन कहाँबाट शुरु भयो, कसरी विश्वभर फैलियो ? - Himali Patrika	रोचक : भात खाने चलन कहाँबाट शुरु भयो, कसरी विश्वभर फैलियो ? - Himali Patrika
रोचक : भात खाने चलन कहाँबाट शुरु भयो, कसरी विश्वभर फैलियो ?
Himali Patrika प्रकाशित मिती - १२ मङ्सिर २०७८, आइतवार
काठमाडौं । बिहानै भात, साँझै भात । यही भात बन्ने चामल र चामल बन्ने धानको इतिहास कति पुरानो होला ? वा नेपालीले यही चामलबाट आफ्नो भोक मेटाउन थालेको कति भयो होला ? नेपालीहरूको अधिकांश खाना चामलविना सम्भव छैन । खाद्य संस्कार मात्रै होइन, हाम्रा धार्मिक गतिविधिमा समेत चामल आवश्यक पर्छ । यति महत्व दिइएको चामल के नेपालमा मात्रै विशेष हो त ? यसको उत्पत्ति र विस्तार कसरी भयो होला ?
नेपालमा धान खेतीको उत्पादनलाई हेर्दा तराईको फाँटदेखि हिमाली जिल्ला जुम्लामासम्म अनुकुल वातावरण देखिन्छ । धान खेतीको लागि तापक्रमले मुख्य भूमिका खेल्छ । धान लगाएको समयमा वायुमण्डलीय तापक्रम २१-३७ डि.से.सम्म उपयुक्त हुन्छ । गाँज हाल्ने समयमा तापक्रम २०-२५ डि.से. उपयुक्त हुन्छ भने फूल पसाउने समयमा तापक्रम २६.५-२९.५ डि. से. हुनुका साथै दिन लामो भएमा उत्पादन बढी हुन्छ (अन्नबाली खेती प्रविधि पुस्तिका-२०७४)।
भारतवर्षमा धानको उत्पादनको इतिहास खोज्दा वैदिक कालसम्म पुग्न सकिन्छ । यजुर्वेदमा धानका पाँच प्रजातिबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये गर्मीमा उत्पादन हुने धानलाई ‘शष्टिका’, वर्षा याममा उत्पादन हुने चामललाई ‘वर्षिका’ वा ‘वृही’, पतझरको समयमा उत्पादन हुने चामललाई ‘शरद’ र चाडो मौसममा तयार हुने चामललाई ‘हिमातंका’ वा ‘शाली’ भन्ने उल्लेख छ (फुड एण्ड ड्रिंक्स अफ एन्सियन्ट इन्डिया -डा. ओमप्रकाश (सन् १९६१)।
पुरातत्ववेत्ताहरु चीनमा आजभन्दा ३००० देखि ४००० वर्षको बीचमा धानको उत्पादन शुरु भएको बताउँछन् । चीनमा चामलको इतिहासबारे लेखिएको पुस्तक जेङ छ्योङसेङको पुस्तक ‘चीनमा चामलको इतिहास’मा पनि यही उल्लेख छ । इसापूर्व ७७० देखि इसापूर्व ४७६ को बीचमा चीनको मुख्य अन्न नै चामल बनेको थियो (द हिस्ट्री अफ राइस इन चाइना-जेङ छ्योङसेङ)।
जापानमा यो विश्वास गरिन्छ कि पकाउनुअघि चामल भिजाउँदा त्यो परिकारबाट सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ र त्यसले खानालाई थप शक्तिशाली बनाउन सहयोग गर्छ । इन्डोनेसियामा राम्रोसँग चामलको परिकार बनाउन नजान्ने बुहारीलाई घर गर्न सहज हुँदैन । त्यहाँ बुहारी छनोट गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार यही हो । यसरी विभिन्न मुलुकको संस्कृतिमा चामलको महत्व छुट्टै छ । साभार : अनलाइनखबरबाट
३४ अर्ब रुपैयाँ थियो यो ‘सबैभन्दा महँगो घर’, अब मूल्य…
पार्टी प्यालेसमा मनाउँदा कुकुरको जन्मदिन ७ लाख खर्च
टिकटक लाइभले जन्मायो ‘माग्ने सेलिब्रेटी, धेरैको अनुरोध हुन्छ, ‘प्लिज मलाई…